MoeMaKa VDO | MoeMaKa Burmese News & Media
ဗိုလ်ချုပ်တို့ဈာပန သတင်းမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၁၉၄၈) (မိုးမခ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) ဖေဖော်ဝါရီ ၀၉၊ ၂၀၁၅ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (၁၉၁၅-၁၉၄၇) အား ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် ဝတ်စုံဖြင့် တွေ့ရစဉ် (ဧပြီ ၁၉၄၂) ဓာတ်ပုံဆရာ – မသိ...
မေဆွိ သပိတ်အစဉ်အလာ (ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံသီချင်း) (ပြန်လည်ဆန်းသစ်ခြင်း) (မိုးမခ) ဖေဖေါ်ဝါရီ ၀၁၊ ၂၀၁၅ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး နှင့် လွတ်လပ်ခြင်း အတွက် တိုက်ပွဲဝင် ခရီးရှည်ချီတက်နေကြသည့် မျိုးဆက်သစ် ကျောင်းသားလူငယ်ကလေးများအား ဂုဏ်ပြုလျက်...
မင်းကိုနိုင် သမ္မတကြီး လုပ်မှာလား ဆိုတဲ့ … အမေး ၊ အဖြေ မင်းကိုနိုင်၊ ဂျပန်မြန်မာမိသားစု တွေ့ဆုံပွဲ (ဖေ့စ်ဘွတ်) ဒီဇင်ဘာ ၁၀၊ ၂၀၁၄ https://www.facebook.com/thanyar.khin/about ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ဂျပန်နိုင်ငံ...
ဆလိုင်းသွှအောင် ၏ ခရစ္စမတ် တေး လက်ဆောင် (၂၀၁၄) (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၀၉၊ ၂၀၁၄ ရပ်ဝေးရပ်နီး က မိတ်ဆွေ သင်္ဂဟများနှင့် တေးချစ်သူများထံ ဤ “နွားစားခွက်ထဲမှ သိုးသူငယ်”...
သန်းရွှေ အကြောင်း မိုးမခ။ ဒီဇင်ဘာ ၀၃ ၊ ၂၀၁၄ မိုးမခ ပရိသတ် ကို သန်းရွှေ အကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီ သန်းရွှေ ကတော့ ပြည်သူတွေ အော့ကြောလန်...
အမြောက်သံ အစား သီချင်းသံ ကြားရစေ မိုးမခ၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၁၄ပြီးခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ (၂၁)၊ အမ်စတာဒမ် မြို့တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ကျင်းပခဲ့သည့်...
ကွယ်လွန်သူ ကာတွန်းဆရာကြီး ဦးဖေသိန်း၏ ဟောပြောချက် – သတင်းစာနဲ့ ကာတွန်းပညာ မိုးမခရုပ်သံ၊ သြဂုတ် ၂၀၊ ၂၀၁၄ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်က ကမောက်ကမ ဖြစ်ရပ်တွေကို သရော်ပြီး ကာတွန်းရေးသား...
Runaway : Present by Aung Htet August 7, 2014 ========= No tags for this post. Related posts No related...
မိုးမခမဂ္ဂဇင်း မိတ်ဆက်နဲ့ စာပေစကားဝိုင်း မြင်ကွင်းရုပ်သံ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဇွန် ၇၊ ၂၀၁၄ ဇွန် ၄ က ရန်ကုန်မြို့ HOME မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ မိုးမခမဂ္ဂဇင်းပွဲ မြင်ကွင်းရုပ်သံဖြစ်ပါတယ်။...
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁ လပြည့် ဆွမ်းကျွေး မဟာစည်ရိပ်သာမှာ ကျင်းပ မိုးမခရုပ်သံ၊ မေ ၂၃၊ ၂၀၁၄ မေလ ၂၁၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာမှာ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း ၁လပြည့်ကို...
ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ကွယ်လွန်ခြင်း ရက်လည်မြင်ကွင်း (ရန်ကင်း၊ ကျောက်ကုန်းအိမ်) မိုးမခရုပ်သံ၊ ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၄ No tags for this post. Related posts No related posts.
မြန်မာနှစ်သစ် သင်္ကြန်၏ အခြားသော စာမျက်နှာများ မိုးမခရုပ်သံ၊ ဧပြီ ၁၉၊ ၂၀၁၄ ရန်ကုန်မြို့၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် ရပ်ကွက်များအတွင်း သံဃာတော်များ ဆွမ်းအလှူခံကြွခြင်း၊ ဒုလဗ္ဗရဟန်းခံခြင်း နှင့် နှစ်သစ်အတွက် အတာအိုး၊ သင်္ကြန်အိုးများဖြင့် ပရိတ်ရွတ်၊...